I-Anakin Skywalker yayenziwe njani ngaphandle koBawo?
I-TV kunye neFilimu Into engeyonyani yebuchwepheshe
Umlando we-Anakin Skywalker
Umntwana ongenamaHoda kunye noTyunjwe
UAnakin Skywalker wayengenabo uyise. Ukuzalwa okubonakalayo kwentombi kuyinto eqhelekileyo kwiinqaba ezininzi zeenkolelo kwaye kwanceda abaninzi baqinisekise ukuba u-Anakin wayekhethiweyo, uzalisekisa isiprofeto sasendulo. Nangona kunjalo, imvelaphi yangempela kaAnakin, mhlawumbi, ibe yingozi.
Ngaba i-Anakin yayidalwa nguMbutho?
Ku "Isiqendu I: I-Phantom Menace," u-Shmi Skywalker uthi u- Qui-Gon Jinn ukuba u-Anakin wayengenabo uyise, kwaye "akayi kuchaza oko kwenzekayo." Apho oku kwenzekayo akuchazwa kwiNew War Wars.
Ngelo xesha, wayekhoboka likaGalulla Besadii uMdala, umfazi wezindlu zakwaHutt. Kwakuphela emva kokuba u-Anakin azalwe kwi-41 BBY ukuba iJudulla yalahleka uShi kunye nomntwana ku-Watto kwi-bet-racing bet. UWatto wabathuthela eTatooine kwi-Out Rim, apho badibana khona nguJedi Master Qui-Gon Jinn kunye noPadawan, u-Obi-Wan Kenobi, xa uAnakin eneminyaka engama-9 ubudala.
U-Qui-Gon wachaza ukuba u-Anakin wakhulelwa ngama-midi-chlorians - izinto ezinobomi ezincedisa iJedi ukudibanisa noMbutho. Oku kuya kuchaza inani lika-Anakin eliphezulu ngokungapheliyo-midi-chlorian count. Kodwa kutheni i-midi-chlorians yenza loo nto?
Ngaba u-Anakin wadalwa nguSith Uvavanyo?
Ku "Isiqendu III: Impindezelo ye-Sith," uPalpatine utshela uAnakin malunga noDarth Plagueis, uSith ofunde ukulawula iMandla ukuze kudala ubomi. Igalelo lakhe lithetha ukuba iDarth Plagueis yasebenzisa i-midi-chlorians ukudala uAnakin. Le nkolelo iyamkelwa ngokucacileyo emva kweSith Lords.
Nangona kunjalo, enye inkolelo ye-fan, engeyona inxalenye ye-Canon ye-Star Wars, i-Darwin Plagueis ayiphumelelanga kwaye i-midi-chlorians ayizange iphumelele le mzamo yokusebenzisa uMbutho kule njongo. Kule ngqungquthela engekho ye-canon, i-midi-chlorians iphindiselela ngokudala uAnakin ngenjongo yokutshatyalaliswa kweSith.
Yiyiphi Imbonakalo echanekileyo?
Inkolelo kaQii-Gon ngokudalwa kuka-Anakin ibonisa ukuba uMbutho unomnqweno owaziyo, kwaye usebenza ngokwawo ukuzalisekisa isiprofeto. Indalo ye-Sith yokudala kuka-Anakin iyahambelana neSith ukujonga ngesiprofeto: ukuba kungaphantsi kwesibikezelo kunye nangaphezulu kwesiphakamiso sokuba umntu kufuneka asebenze ukuzalisekisa.
Ngakolunye uhlangothi, u-Anakin oMandla oPhezulu ophezulu, ukuzalwa ebugqilini, kunye nokuqeqeshwa kweJedi kamva, wamenza waba ngumviwa okhethwe nguSith ukuphathwa, ecetyisa ukuba uDarth Plagueis wamdala ngenxa yaloo njongo. Ngakolunye uhlangothi, ukuba uSith abeke u-Anakin kwindawo efanelekileyo ukuzalisekisa isiprofeto soMkhethiweyo kwiJedi kunye nokutshabalalisa iSith.
Zombini izibuko zifanele kwaye zamukelwe ngabalingani abahlukeneyo kwi- Star Wars jikelele. Kungenzeka ukuba iimbono zombini ziyinyani (ukusuka kwindawo ethile yokujonga): ukuba iDarth Plagueis yayinokukwazi ukuphatha i-midi-chlorians ukudala ubomi-umntu onokufunda naye wayengakwazi ukuphindaphinda - ngenxa yokuthanda kukaMandla ukudala uAnakin .
Ewe, kukho njalo ukuba u-Anakin wakhulelwa ngendlela eqhelekileyo. Ngokuqinisekileyo, umfazi ogqithekileyo uya kuba segazini lokungavumi ngokwesini okanye angaba nesizathu sokufihla ubudlelwane obuvumelana naye.
Wayenokuba yidakirha kwaye engazi malunga noko kwenzekayo, kunokuba axoxe okanye aphike. Oku kwakuza kutshabalalisa uAnakin ekubeni yinto ekhethiweyo engabonakaliyo, kodwa izisa amathuba anomdla malunga nokuba ngubani uyise onomntu onokuba nguye.
Udidi olukhethekileyo utshintsho kwiinkwenkwezi zeenkwenkwezi: isiqendu IV: Ithemba elitsha
Inkcazo yeLizwi elithi 'Darth' kwi-Star Wars Universe
Iimali ezilahlekileyo ze-6 kunye nee-7 zee-Star Wars: i-Clone War '
Iimfazwe zeNkwenkwezi ze-10 ze-Oscar
I-Darth Vader: I-More Machine kunomntu
Ukuqonda indlela enokwenzeka ngayo ukuba uNkosana uLeia akhumbule umama wakhe
Iimfazwe zeNkwenkwezi Imibuzo: Zibaninzi abantu abakwi-Troopers?
I-Princess Leia Organa Solo
Indlela yokwakha iRicker Ramp Ramp
MBA Guide Guide
Izakhiwo zeZakhiwo eziphakamileyo kwiSixeko saseNew York
Isingeniso kwiinjongo zoPhuhliso oluKhuselekileyo
ISICELO Sebenzisa kwi-Class ESL / EFL
Iprofayile yeCorazon Aquino
Iingxelo ezintlanu ezimfutshane kwi-Big Astronomy
Emva kweMfazwe Yehlabathi I: Imbewu yeZintlontlwano zoLutsha oluzayo
Iinkolelo zeKristadelphian kunye nemiSebenzi
I-Mako Shark, i-Shark esheshayo elwandle
'Yiyiphi' njengesiNgesi saseFransi: Iyiphi na? Intoni?
Ingaba Iikati Ziyabona Ebumnyama?
Izikhokelo zokulanda nokufaka i-Visual C # 2008 Express Edition
Indlela yokufundisa i-Digraphs yokuFunda nokuPhumelela kwePelo
I-Parataxis kuYohn Steinbeck's 'Paradox and Dream'
Iingcebiso zoMdaniso weMdaniso
Umthandazo wamaSilaysia Ubuhlalu: Subha
Yimini Yonke Imini?
Indlela yokuhlawula i-Sand Bunkers
Ubomi beMarine Inkcazo kunye nemizekelo